UDonovan Ruddock vs Dillon Carmen | boxen247.com
Kungenxa yoko le nto ungalwi ungena kwiminyaka yakho yama-50 njengembethi manqindi eqeqeshiweyo
UDonovan Ruddock vs Dillon Carmen (2015). URazor Ruddock wenza ukubuya kwakhe ngo-2015, ukukhokela kwabhalwa kakuhle njengoko wayeneminyaka emininzi yoqeqesho (engaphezulu kuninzi olungena kumdlalo wamanqindi).
"Bendihleli eringini noTyson, bonke aba bafana, kwaye ndiyakuxelela: Ndiziva ndibhetele ngoku, kunangaphambili."-Razor Ruddock.
Uqale walwa noRaymond Olubowale (10-6-1) nge-28/3/15, ephumelela yi-TKO. Uye emva koko walwa no-Eric Barrak (8-2-0) nge-22/5/15, ephumelela isigqibo ngamxhelo-mnye. Inqaku eliphambili apha kukuba uRuddock, nangona ephumelela yomibini le miqolomba, wayejongeka engonwabanga kwaye engonwabanga phantsi komlilo (ngakumbi kwi-Olubowale bout).
“Uninzi lwabaphangi luza kujonga iRuddock njengomchasi onobungozi kwinto yokuba ukuba boyisiwe, ukuthembeka kwabo njengemfazwe kuya konakala. Ukuba uRuddock uyalothusa ihlabathi kwaye eneneni abethe umntu okhuphisana naye kwinqanaba eliphezulu, angavuka afumane isihloko kwisihloko. Kodwa amathuba okuba yenzeke manqabe kakhulu. ”—UKitson Vincent
Ke nge-11/9/15, walwela itayitile yobunzima baseCanada ngokuchasene noDillon Carmen, ophethe isihloko. Ngeli xesha irekhodi lomdlalo wamanqindi o-8-2-0, kwaye engenantlonipho, uCarmen wayengumlwi wenqanaba lasekhaya ngokugqibeleleyo. URuddock uqhubeke nokuphulukana nomjikelo we-3 we-KO, kwaye ibiyinkqonkqoza elibi.
Le lahleko ibonakalise ukuphela kokubuya kukaRuddock eneminyaka engama-51 ekufuneka isebenze njengesikhumbuzo kwabanye abalwi ukuba akufuneki ubuye njengembethi manqindi eqeqeshiweyo kwiminyaka yakho yama-50. Oku kunokuba yingozi kwaye ngethamsanqa uRuddock wayelungile emva koko.